बिजुली यसरी चोरिँदोरहेछ ! अनि किन नहोस् लोडसेडिङ ? प्राधिकरणकै एक दर्जन कर्मचारी पक्राउ परेपछि रहस्य खुल्यो - Nepal, Himalayas, political news, science & Technology, Social, sports, economy, Business, Entertainment, Interview, Audio, Video, Actor, Actress, blog
बिजुली यसरी चोरिँदोरहेछ ! अनि किन नहोस् लोडसेडिङ ? प्राधिकरणकै एक दर्जन कर्मचारी पक्राउ परेपछि रहस्य खुल्यो
काठमाडौँ, माघ १०। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै कर्मचारीको मिलेमतोमा वर्षाैँदेखि ठूला उद्योगहरूलाई निःशुल्क बिजुली दिइँदै आएको खुलेको छ । कमिसन लिएर उद्योगीलाई निःशुल्क बिजुली दिँदै आएका प्राधिकरणका १२ कर्मचारी र चार व्यवसायीलाई प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरेको छ, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
महानगरीय अपराध महशाखाले प्राधिकरणका सुपरभाइजर र मिटररिडरहरूलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेकामध्ये केही कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेता हुन् । मनिज श्रेष्ठ कर्मचारी संघको कोषाध्यक्ष हुन् भने दिलबहादुर साउद केन्द्रीय सदस्य । त्यस्तै, महादेव प्रधान कर्मचारी युनियन विद्युत् प्राधिकरण इकाइका सल्लाहकार हुन् । प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू हेटौंडा गएका बेला प्रधानले आफ्नै घरमा मिटर रिडिङका उपकरण राख्ने गरेका थिए ।